Shir looga hadlayay adeegyada shirkadda Golis oo Garowe lagu qabtay | Golis Telecom Somalia
Shir looga hadlayay adeegyada shirkadda Golis oo Garowe lagu qabtay
Xarunta Shirkadda Isgaarsiinta Golis ee magaalada Garowe ayaa guddiga suuqgaynta ee shirkadda qaybteeda Garowe waxay ku qabteen shirkii labaad oo looga gol-lahaa in maskax tuujin lagu sameeyo shaqaalaha shirkadda qaybteeda Garowe si loo hormariyo loona dardargaliyo isticmaalka adeegyada shirkadda Golis.
Shirkan oo ay ka qayb galeen qaar kamid ah masuuliyiinta shirkadda Golis xarunta dhexe oo ay kamid ahaayeen madaxa Supply Chain-ka Maxamed Mire agaasimaha horumarinta gobalada C/risaaq aw Cali.
Gudoomiyaha Guddiga suuqgaynta shirkadda Golis xarunta gobalka Nugaal Eng.maxamed sh.don ayaa shirka kasoo jeediyay warbixin ku saabsan hawlaha u qabsoomay mudooyinkii dambe isagoo xusay in adeegga Internetka ay gaarsiiyeen goobo badan oo ay ay kamid yihiin hay’adaha xarumaha dawladda iyo Airportka magaalada Garowe iyo hawlo kale oo aad u badan oo uu sheegay inay ku guulaysteen dhamaystirkooda.
Maxamed Mire ayaa dhankiisa uga mahadceliyay shaqaalaha shirkadda Golis xarunta Garowe sida ay ugu heelan yihiin horumarinta shirkadda isagoo ku booriyay inay laban laabaan dadaalkooda.
Waxaa shirka shahaado sharaf lagu gudoonsiiyey 6 ka mid ah shaqaalaha xarunta garowe shahaadooyinkan oo ay ku mutaysteen dadaalkii dheeriga ah ee ay muujiyeen intii u dhaxay say labada shir.
ugu danbayntii waxaa shirka soo xiray Agaasimaha horumarinta Gobalada C/risaq Awcali shahaadooyinkiina gudoonsiiyey shaqaalaha.